ကျွန်တော် နှင့် ဘာသာပြန်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်တော် နှင့် ဘာသာပြန်…
ကျွန်တော် နှင့် ဘာသာပြန်…
- Yae Myae Tha Ninn
Posted by Yae Myae Tha Ninn on Sep 17, 2014 in Creative Writing, Know-How, DIY | 50 comments
ကျွန်တော် နှင့် ဘာသာပြန်... ဂျန်န၀ါရီ နောလစ်...
. တကယ်တော့ ဘာသာပြန်ခြင်းဟာလဲ အနုပညာ တရပ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ဆိုချင်ပါတယ်…
. အနုပညာဆိုတာ အကြမ်းပညာ မဟုတ်ပါဘူး… တကယ်ပြောတာပါ… ကလောင်တချက် မက်ဆစ်လေးတခုနဲ့ တော်တော်လေးကို ပြောင်းလဲသွားအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းလို့ပါ…
. ဒီတော့ တာဝန်ကြီးပါတယ်… ပြောခဲ့ဖူးသမျှဟာ သမိုင်းပါပဲ… သမိုင်းဆိုတာ ကိုယ့်သားစဉ်မြေးဆက်ထိ အမွေဆက်ခံတယ်လို့ ယူဆပါတယ်…
. ဘာပြောချင်လို့ ဒီလောက် နိဒါန်းချီလဲ ဆိုရင် လက်ရှိ ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ခြင်းအလုပ်တခုကို လုပ်ဆောင်နေပါတယ်…
. စားဝတ်နေရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ကြတာ တူပေမဲ့ ၀ါသနာပါတာကို လုပ်ရတော့ ပျော်ပါတယ်… ဒါနဲ့စားဖို့ထိ မထူးချွန်နိုင်လောက်ပေမဲ့ ဒါလေးက ရတာကိုတော့ မက်မောမိပါတယ်… ပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်…
. ဘာသာပြန်ရာမှာ တချို့က မြန်မာပြုတယ်… တချို့က အတိအကျ ဘာသာပြန်တယ်… တချို့က ဖတ်ကောင်းအောင် ပြန်တယ်… တချို့က လုံးကောက် ပြန်တယ်… တချို့က လုံးပေါင်း ပြန်ကြပါတယ်…
. မြန်မာပြုဖို့ကတော့ မလွယ်ပါဘူး – တော်တော် အချိန်ပေးရပါတယ်… မူရင်းစာကို လုံးဝသဘောပေါက်… မြန်မာ့စာပေ စကားလုံးလဲ ထည်လဲ သုံးနိုင်မှပဲ စာချောမှာပါ…
. အတိအကျ ဘာသာပြန်တာတော့ – ရုံးစာလိုမျိုးဆို တာဝန်ကြီးပါတယ်… ပြဌာန်းချက်ဆို ထိတောင် မထိရဲပါဘူး… ဒါပေသိ အိပ်ယာဝင် ပုံပြင်တွေကိုတော့ အတိအကျ ပြန်ပေးဖူးပါတယ်…
. ဖတ်ကောင်းအောင် ပြန် – ဒါကတော့ မူရင်းစာကို တော်တော်သဘောပေါက်ပြီး… တိကျမနေဘဲ အဓိပယ် သက်ရောက်အောင် ပြန်ရင် ရပြီ… ခုလက်ရှိသုံးဖြစ်တယ်ပေါ့…
. လုံးကောက် – သူလဲ ဖတ်ကောင်းအောင် ပြန်နဲ့ နီးစပ်ပါတယ်… သူက Sentence တခုစီကို ပြန်တာပါ… တခါတလေ Conjunction များရင် ဖတ်ကောင်းအောင် ၂ ကြောင်းခွဲရေးတာပါ…
. လုံးပေါင်း – သူကတော့ လုံးကောက်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် Sentence ၂ ကြောင်းကို ၁ ကြောင်းထဲနဲ့ အဓိပယ် ဆီလျော်အောင် ပြန်တာပါ…
. ဒါတွေက ဘယ်သူရေးတာလဲဆိုရင် ကျွန်တော် ရေးတာပါ… ကျောင်းတက်တုန်းက မေဂျာယူထားတယ်လေ… ဟီး… အဲကထဲက ၀ါသနာပါတယ်ဗျ…. အတန်းလဲ မှန်အောင် တက်တယ်…
. ခုနကဟာတွေက အခုဘာသာပြန်တုန်းရော အရင်က သင်ခဲ့တာရောကို ပြန်ပြီး ကောက်နုတ်လိုက်တာပါ… သိပ်ပြီးတော့ မသေချာလောက်ပါဘူး…
. ခုဆို ဘာသာပြန်တာ သိပ်တော့ မကြာသေးပါဘူး.. အရင် လုပ်ဖူးတာတွေနဲ့ ခြားတာပေါ့… ဂျာနယ်တိုက်မှာလဲ စာစစ်လုပ်ဖူးပါတယ်… တလပါပဲ သူဌေးနဲ့ ကွိုင်ပြီးထွက်ခဲ့တယ်…
. အင်တာနက် ဂျာနယ်အတွက် ပြန်ဖူးတယ်… နောက်တော့ စာမူယူရတာ ဝေးတော့ မပြန်ဖြစ်တော့တာ…
. ပြီးတော့ ခိုးကူးပေါ်တော့ စာတန်းထိုးပါတယ်… အခွေတွေ ရာနဲ့ချီပြီး ပြန်ဖူးတယ်… ခုတော့ ခေတ်မကောင်းလို့ မလုပ်တာ ကြာပြီ…
. ကလေးလစဉ်ထုတ်စာစောင်အတွက် အိပ်ယာဝင်ပုံပြင် ( ခေတ်သစ် ) ပြန်ပေးဖူးတယ်…
. Idea မဂဇင်းအတွက် ဂီတအကြောင်း ရေးနေတုန်း မြေကိစ ထဲ လုံးလုံး ရောက်သွားတယ်…
. ပြောချင်တာကတော့ မစိမ်းဘူးလို့ပါပဲ… ဒါပေမဲ့ အခုဟာက စိမ်းနေတယ်ဗျ… လိုင်းစုံတယ်… စီးပွားရေး အကြောင်း၊ စာရင်း အကြောင်း၊ ကျန်းမာရေး စတဲ့ ကဏ္ဍ စုံတယ်ဗျ…
. အဲထဲမှာမှ အပေါ်က ပြောတဲ့ နည်းတွေ မြန်မာမှုပြုတာကလွဲရင် အကုန်သုံးဖြစ်တယ်… ဒါပေမဲ့ စာကခရီးမတွင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်…
. အပေါ်က ပြောခဲ့သလို ဘာသာပြန်တာကို အဲလို ခံယူထားတော့…
. စာမူရတာနဲ့ ပထမ တခေါက် အကြမ်းဖတ်တယ်… ဒုတိယ အချောဖတ်တယ်… တတိယ မသိတာတွေ ၂ ခွ အဓိပယ်ရှိနိုင်တာ မျဉ်းသားတယ်… အဘိဓာန်ကြည့်တယ်…
. ပြီးရင် စိတ်ထဲမှာ စာကြမ်း ပြန်တယ်… မူရင်းဆိုလိုချက်ကို လေ့လာတယ်… ခေါင်းစဉ်စဉ်းစားတယ်… မူရင်းနဲ့ မကွဲ မြန်မာမျက်လုံးလဲ ယဉ်… လူလဲ စိတ်ဝင်စား…
. ပြီးတာနဲ့ စာစီပါပြီ… တကြောင်းချင်းကို ဘယ်လို ပြန်ရမလဲ… ဘယ်နည်းသုံးရမလဲ… စဉ်းစားရေး… အကုန်ပြီးရင် ဖတ်လို့ချောလား…
. စာရော ဖတ်ရင် ပြေးလား… ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဆို ပြေးမှကောင်းတာလေ… ထောက်နေလား… စကားလုံးတွေက ထပ်နေလား… ဘာတွေ ရေလဲ သုံးလို့ ရလဲ…
. ဖတ်လိုက်ရင်ရော… ဘယ်သူမဆို ဖတ်ဖတ်.. နားလည်မလား… ဒါတွေက လိုင်းသီးသန့်မဟုတ်ဘူးလေ… လူစုံဖတ်မှာဆိုတော့… မူရင်းအရသာပျက်သွားလား…
. အနုလုံ ပဋိလုံ စီစစ်ပါတယ်… နောက်ဆုံးတခေါက်… ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကိုက်ရဲ့လား… ပြန်ကြည့်ပါတယ်… ပြီးမှ Release လုပ်ပါတယ်…
. ဒါတွေက ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ရင် လုပ်တဲ့ Process တွေပါပဲ… ပျင်းသွားပြီလား…
. အဆုံးထိ အားပေးခဲ့ရင် ကျေးဇူးပါ… တခုကျန်ခဲ့သေးတယ်… ဟီး… ဒါက ကျွန်တော့် စတိုင်လ်ပဲ… ကိုယ်ရေးခဲ့တဲ့စာကို ကိုယ်ပြန်ဖတ်ရင် သိသာအောင် Trade Mark လုပ်ထားတာပါပဲ…
. အချိန်ပေးလိုက်ရပြီး တန်ဖိုးမဲ့စေခဲ့ရင် အားလုံးကို ဆောရီးပါနော်…
About Yae Myae Tha Ninn
Yae Myae Tha Ninn has written 115 post in this Website..
မြိတ်သား၊ မိတဆိုး၊ ကလေးအဖေ၊ သားကောင်းဖခင်ကောင်းခင်ပွန်းကောင်းသားမက်ကောင်း ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေသူ... အောင်မြင်ခြင်း မအောင်မြင်ခြင်းကတော့ အခြေအနေအချိန်အခါအကြောင်းအရာပေါ်မူတည်မှာပဲ...
View all posts by Yae Myae Tha Ninn →
စာတစ်ခုကိုရေးပြီး ပထမဆုံးစာဖတ်သူဟာ မိမိကိုယ်တိုင်ဘဲလေ။
ဟုတ်ပါ့ ကိုခကြီးရေ… တခါတရံမတော့ မိန်းမက ပထမ ဖတ်ရတာ.. သူနဲ့ တူတူ ဘာသာပြန်တာကိုး.. သူက ဒီလိုလေး ရေးဆို ရေး ရတယ်… ပြီးရင် သူ့အရင် ပေးဖတ်တယ်.. သူက အင်း ဆိုမှ…
ဒီ ဆောင်းပါးလေး ကောင်းတယ်။
သများကတော့ အကြမ်းပညာပဲ တတ်လို့ အနုပညာတွေဆို လေးစားတယ်။ :mrgreenn:
ကျေးကျေး ဇီဇီ… အက်ဆေးလို့ ပြောလဲရတယ်ဗျ… :D
ကျနော်ကတော့ ဘာသာပြန် ဘဝကနေ အယ်ဒီတာဘဝ ရောက်လာသူပါ ၊
ဒါပေမယ့် ဘောလုံးဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်မို့ ဘောလုံးသတင်းတွေပါပဲ ၊
နောက် ဘောလုံးဂျာနယ်တွေမှာ သတင်း နဲ့ ဆောင်းပါး ၊
ဝယ်သူ့စိတ်ကြိုက်ဂျာနယ်အတွက် မော်တော်ကားသတင်း ၊
ဝဲလ်နက်စ်ဂျာနယ်အတွက် ကျန်းမာရေးသတင်းတွေ ရေးပေးခဲ့ပါတယ် ၊
အခက်တွေ့တာက ကျန်းမာရေးသတင်းပါပဲ ၊
ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတွေက ကျနော်နဲ့ အတော်ဝေးတာကိုး ၊
၆ လလောက် ရေးပေးပြီး မရေးတော့ပါဘူး ၊
အဲဒီ သတင်းတိုလေးတွေကို ဆရာဝန်တစ်ယောက်က ဆက်ရေးပါတယ် ၊
အခုနောက်ပိုင်းတော့ အလုပ်များတာနဲ့ ဘယ်မှာမှ သိပ်မရေးဖြစ်ပါဘူး ၊
အမေကတော့ ကျနော့်ကို စာရေးပျင်းသူလို့ ကင်မွန်းတပ်ပါတယ် ၊ ( အမေကတော့ တကယ်ရေးနိူင်တာ )
အဲဒီ ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာ သူ့အပိုင်းနဲ့သူ ခက်တာတွေ ရှိပါတယ် ၊
ဘောလုံးကတော့ အလွယ်ဆုံးများ ဖြစ်မလားပဲ ၊
ဘောလုံးသတင်းတွေနဲ့ အဆက်မပြတ်ရင် ဒီနည်းပြ ဒီကစားသမား
ဒီလိုပဲ ပြောလာမယ် ဆိုတာ မှန်းလို့ ရနေတာကိုး ၊
ကဗျာကိုတော့ မပြန်ဖူးသေးဘူး ၊
ဘာသာပြန်မှာ ကျနော်က သတင်းဆို စကားပြေလို ရေးပြီး ဆောင်းပါးဆို စကားပြောနဲ့ ရေးပါတယ် ၊
ဘာသာပြန်ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းရင် ရပြီလို့ ထင်နေသူတွေလည်း တွေ့ဘူးပါတယ် ၊
တကယ်တော့ မြန်မာစာ အရေးအသား အသုံးအနူန်း နဲ့ စာချောအောင်ရေးတတ်ဖို့ လိုပါတယ် ၊
လာမန်ု့လို့ ကျေးဇူးပါ.. ကိုမျိုးသန့်… သဘောကျလို့ စိမ်းလိုက်ပါတယ်… မခက်သော်လည်း မလွယ်ပါနော်…
စာလဲ မြန်မာလို ချောရမယ်
မူရင်း အဓိပ္ပာယ်လဲ မပျက်စေရဘူး
အဲ့ဒီလို ဘာသာပြန်ရတာ အရမ်းခက်မယ့် ကိစ္စလို့ပဲ ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ
(ဘာသာပြန်ဖို့ မပြောနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရေးချင်တာတောင် အဆီအငေါ်တည့်အောင် မရေးတတ်ဘူးဆိုတော့)
အင်္ဂလိပ်စာ က နေ မြန်မာဘာသာ ကို ပြန်ရတာ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လို့ အတော်လေး အဆင်မပြေပါဘူး။
ဖတ်လိုက်ရင် ထောင့်ထောင့်ကြီး ဖြစ်နေမှာ။
တစ်ခါတစ်လေကျတော့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဟာကို တစ်ပုဒ်လုံး နားလည်အောင် ဖတ်ကြည့်။ ပြီးတော့မှ အဲ့ဒါတွေကို မြန်မာဘာသာ နဲ့ အဆင်ပြေအောင် ပြန်ရေး။
အဲ့ဒါက ပို အဆင်ပြေမလားလို့နော်၊ တစ်လုံးချင်း တစ်ကြောင်းချင်း ဘာသာ ပြန်နေတာထက် စာရင်။
ဆရာကြီး သော်တာဆွေ ကတော့ ဘာသာပြန်ရတာ ဟာသ စာပေ က အခက်ဆုံးတဲ့
မန့်ပေးလို့ ကျေးကျေးပါ ဂျက်… ညီပြောသလို အကိုလုပ်ပါတယ်ကွယ်… Process တဆင့်ချင်းစီလုပ်ပါတယ်ကွယ်…
…ဘာသာပြန်ဆိုလို့ ..စကားပြန် နဲ့များဆင်မလားလို့…စီးပွားရေး ပွင့်လင်းစပြုလာတဲ့ ဗမာမှာ …သိပ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့ဗျာ..ခရီးသွားကုန်ပဏီက အင်္ဂလိပ်ဧည့်လမ်းညွှန်တွေဆိုရင် …စားပြီးသောက်ပြီး စရိတ်ငြိမ်း တရက် 45 ကျပ်( တချို့ စီနီယာများ 50 -70 )ရပါတယ်ခင်ဗျ ။ . …အစ်ကိုရေ…ရွာထဲကညီလေးတစ်ယောက်တောင် အဲ့မျိုးစလုပ်နေလေရဲ့ ..စကားနှစ်မျိုးသာတတ်ရင် …..(Conference translator မျိုးဆိုရင် ) ..( ဥပမာ ..အင်္ဂလိပ်ဂျပန် ။ အင်္ဂလိပ် ဂျာမန် ။ အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် ..)လုပ်ခ တစ်ရက်ကို အစိမ်း နှစ်ရာလောက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ခင်ဗျ ။ ဆိုတော့ အစ်ကို့လို …အရည်အချင်းရော.လက်စလက်နရှိသူများ ..ထပ်ကြိုးစားကြည့်စေချင်
ဟုတ် ဆင်သလိုပဲ … ဆောရိုး.. ဒါပေမဲ့ ဘာသာပြန်က စာပဲ.. စကားပြန်က လူနဲ့ ဆက်ဆံရတာ.. ပိုဆိုးတာက နိုင်ငံခြားသားဖြစ်နေတာပဲ… အကြံပေးတာ ကျေးဇူးပါ…
.လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စည်းမျဉ်းတွေလိုမျုိူးကိုဘာသာပြန်ဖူးပါရဲ့
.ကိုယ်စက်ရုံ အလုပ်ရုံအတွက်ဆိုတော့ သိပ်ပြသနာမရှိလှပါဘူး
.ကိုမျိုးသန့်ပြောသလို“တကယ်တော့ မြန်မာစာ အရေးအသား အသုံးအနူန်း နဲ့ စာချောအောင်ရေးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်”…ဆိုတာလေးပဲကရုစိုက်ရတာပေါ့…
ဟုတ်ပါဘူး ဦးကြီးမိုက်ရယ်… တတ်လို့တော့ ဟုတ်ပါဘူး… ငတ်လို့ လုပ်တာပါ… ၀ါသနာပါတာလဲ ပါတယ်… ကျေးကျေးနော်.. မန့်လို့… :D
ကျနော်က ရုံးမှာတော့ Biznet ကိတ်စ အီးမေးတွေ ဘာသာပြန်၊ စကားပြန်လဲ လုပ်ရတယ်၊ သဂျီးဆိုဒ် ကြော်ငြာ Western Union ဆိုရင် ကျနော် ဘာသာပြန်ပေးတာ (ဒါက အလွတ်ကြွားတာ)
ဒဂျီးဆီ ဒီဇိုင်းပေးတော့ အမေရိကားနဲ့ အမေရိကန် ကို ပြန်ပြင်ခိုင်းလို့ ပြင်ပေးရသေးတယ်.. တော်တော် စိစစ် လက်ပေါက်ကပ်သူဂျီးပါအေ..
အခု..ကြော်ငြာထဲ.. Gilead ကြော်ငြာဘာသာပြန်လာတာများ.. တော်တော်အခြေအနေဆိုးသမို့.. ပြန်ပြင်ပေးလိုက်တာ.. ပြန်ပြင်ရင်.. အဆင့်ဆင့်ပြန်တင်နဲ့.. အချိန်အရမ်းကုန်တာမို့.. ဒီအတိုင်းပဲ.. ထားပေးပါဆိုတယ်ဗျ..။
အဲဒီ Gilead က. အသည်းရောဂါ စီပိုးကို.. ပျောက်အောင်ကုနိုင်သွားပြီတဲ့ခင်ဗျ..
ယူအက်စ်မှာ.. ဒေါ်လှ ၈သောင်း၎ထောင်..။
အိန္ဒိယမှာဆေးသွားထုတ်တာ… ဒေါ်လာ ၉၀၀နဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတာပဲ..
သတင်းပေးတာ ကျေးဇူး တဂျီးရေ… ခက်တာက ငွေက တွင်းထဲက ထွက်မှ ကုနိုင်တော့မယ်…
အိုက်တုံးက WU က Marketing Manager က အတော်ပြောရဆိုရအဆင်ပြေတယ် ဒဂျီးရဲ့ ကျနော် ကြော်ငြာတွေမှာ back translation တောင် သိပ်လုပ်ပေးစရာမလိုဘူး၊
စီပိုးဆေးပေါ်တာဝမ်းသာစရာ ဒါပေသိ မြန်မာမှာတော့ ဘီပိုးက ပိုပေါသလားလို့ .. ဆေးမပေါ်သေးဘူးနော်..
ဒါဆို ၀ိုးလဲ တဂျီးနဲ့ နိုင်ငံတူတာပေါ့… ဟုတ်လား…
ဒါဆို ၀ိုးဆီ ပညာတွေ ယူရဦးမယ်ဗျ… တဂျီးက အဲလိုလဲ မဟုတ်လောက်ပါဘူး …
ကျနော် ဝေါဟာရ သိပ်မကြွယ်ဘူး… စီးပွားရေးနဲ့ ရုံးလုပ်ငန်း အသုံးအနှုံးတွေလောက်ပဲသိတာပါ
ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ အခွေတွေ စီးရီးတွေ ဘာသာပြန်တဲ့သူတွေကိုတော့ အံ့သြချတယ်…
She is hot! ကို သူမက ပူတယ် တို့…
ကောင်မလေးတစ်ရောက်တွေ့လိုက်လို့ “Cool” လို့အော်လိုက်တာကို အေးတယ်နော် လို့ ဘာသာပြန်တာတို့ Show yourself ကို မင်းဘာပြစရာရှိလဲတို့ … public ကို ပြမဲ့ဟာတွေကိုတော့ စိစစ်ရေးလေးထားရင် ကောင်းမယ်လို့ တစ်ခါတစ်လေ တွေးမိတယ်…
ဆရာ အတ္တကျော် ရေးထားတာလေး အကြောင်းစုံလို့ လာပြတာ။
ရုပ်ရှင် စာတန်းထိုးအတွက် ဘာသာပြန်အလုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာ ဘယ်လို ကန့်သတ်ချက်၊ ဘယ်လို အရည်အချင်း စစ်ပြီးမှ ခန့်သလဲတော့ ကျွန်တော်မျိုးလည်း မသိပါ။
အခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေု့တုန်းကတော့ လန်ဒန်ရှိ စာတန်းထိုးကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကျွန်တော့်ဆီ ဆက်သွယ်လာပါတယ်။ စာတန်းထိုး ဘာသာပြန်ဖို့အတွက် စိတ်ဝင်စားသလားတဲ့။ ဝင်စားရင် ကိုယ်ရေးရာဇဝင် ပို့ပေးပါတဲ့။
ပိုက်ဆံသာ ကောင်းကောင်း ရမယ်ဆို ဘာမဆို စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုပြီး ကိုယ်ရေးရာဇဝင် ပို့ပေးလိုက်တယ်။
ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုတော့ အထင် တအားကြီးပါတယ်၊ သို့သော် စာတန်းထိုး ဘာသာပြန် အလုပ်က သာမန် ဘာသာပြန်အလုပ်နဲ့ မတူတာမို့ စာမေးပွဲ ဖြေရပါမယ်တဲ့။ ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာကလည်း အမာထည်မှာ ဘယ်အဆင့်၊ အပျော့ထည်မှာ ဘာတွေ သုံးဖို့ အနိမ့်ဆုံး သတ်မှတ်ချက်တွေလည်း ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာကတော့ သူ့အနိမ့်ဆုံး သတ်မှတ်ချက်ကို ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာက ကျော်ပါတယ်။ စာမေးပွဲလည်း ဖြေပါ့မယ်လို့ ပြောလိုက်တော့ မေးခွန်းလွှာ ရောက်လာတယ်။
မေးခွန်းက ၄ ပိုင်း ပါတယ်။
ပထမပိုင်းက ဝတ္ထုဇာတ်ကြောင်းလို စာပိုဒ် နှစ်ပိုဒ်ကို ဘာသာပြန်ခိုင်းတာ။
ဒုတိယပိုင်းကကျတော့ လူနှစ်ယောက် အချီအချ စကားပြောခန်းတိုလေးတွေကို ဘာသာပြန်ခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့စကားပြောခန်းအတွက် အလွန်ဆုံးမှ အက္ခရာ (ကကြီး ခကွေး) ၃၇ လုံးသာ ပါရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ အလွန်ဆုံးမှ နှစ်ကြောင်းပဲ ဘာသာပြန်ရပါမယ်တဲ့။
တတိယပိုင်းလည်း မနီးရိုးစွဲပဲ။ စကားပြောခန်းပဲ။ သတ်မှတ်ချက်လည်း အတူတူပဲ။
နောက်ဆုံးအပိုင်းကကျတော့ ကန့်သတ်ချက်မပါဘူး။ ဘာသာပြန်ရုံပဲ။ သို့သော် အင်္ဂလိပ် အရပ်သုံး စကားတွေ နားလည် မလည် စစ်ဆေးတဲ့ မေးခွန်း ၁၄ ပုဒ် ပါပါတယ်။
အဲဒီ့ ၁၄ ပုဒ်ထဲက တစ်ပုဒ်ကို နမူနာအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
-She gives me the willies.
-Easy now. Don’t let her get under your skin.
ကျွန်တော်က ဘယ်တော့မှ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာတာ မဟုတ်ဘူး။ (ဆယ်တန်း စာမေးပွဲတုန်းက ရူပဗေဒ ဘာသာမှာ လုပ်ဖူးတယ်။ ရှစ်ပုဒ်ပေးပြီး နှစ်သက်ရာ ခြောက်ပုဒ်ကို ဖြေခိုင်းတာမှာ ရှစ်ပုဒ်စလုံး ဖြေထည့်လိုက်ပြီး အဖြေလွှာ ထိပ်မှာ နှစ်သက်ရာ ခြောက်ပုဒ်ကို စစ်ပါလို့ လုပ်လွှတ်တဲ့ လူစားမျိုးလေ။)
အဲတော့ သူတို့စာမေးပွဲကိုလည်း ဖြေချင်သလို ဖြေထည့်လိုက်တယ် (ဧပြီ ၃ ရက်)။
သူတို့ဆီက ဘယ်သူ စစ်တယ်တော့ မသိဘူး။
စာစစ်သူဆီက အဖြေမရခင် လှမ်းဆက်သွယ်သူက ကျွန်တော် ညွှန်ကြားချက် မလိုက်နာတာ တွေ့ရတယ်တဲ့။ နှစ်ကြောင်းပဲ ပြန်ပါဆိုတာကို သုံး-လေး ကြောင်း ပြန်လိုပြန်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ရပါတယ်တဲ့။ စာစစ်သူဆီက အဖြေရမှ ဆက်သွယ်ပါ့မယ်တဲ့။
ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့ကျတော့ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်း စာရတယ်။ ကောင်းကောင်း ဖြေနိုင်ပါတယ်တဲ့။ တကယ်လို့ ကျွန်တော့်ကိုသာ စာတန်းထိုး ဘာသာပြန်ခိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းလေး လမ်းညွှန်ပေးဖို့ လိုလိမ့်မယ်တဲ့။ သို့သော် ကျွန်တော့် အဖြေလွှာအရ ကျွန်တော်ဟာ ဘာသာပြန်သူထက် သူများ ပြန်ထားတာကို စစ်ပေးတဲ့သူသာ ဖြစ်သင့်တာမို့ အဲဒီ့ အလုပ်ကို လက်ခံဖို့ ကမ်းလှမ်းလာပါတယ်။
ကျွန်တော် ဘာလုပ်တယ် မှတ်လဲ။
ဇွန်လထဲမှာ သူတို့ဆီက အလုပ်ခန့်စာ စာချုပ်ပို့ပေးလာတယ်။ ကျွန်တော် လက်မှတ်ထိုးပြီး ပြန်ပို့ပေးဖို့ပေါ့။
ဟဲ… ဟဲ… ပျင်းလို့ စာမေးပွဲ ဖြေကြည့်တာလေ။ အခု အောင်ပြီပဲ။ တော်ရောပေါ့။ ဘာအကြောင်းမှ မပြန်တော့ဘဲ မီးသီးခြင်ထောင် ထောင်နေလိုက်တယ်။
ပြောချင်တာက စာတန်းထိုး ဘာသာပြန်အလုပ်ကို သူတို့ နိုင်ငံတွေမှာ အဲသလို စနစ်တကျ စစ်ဆေး၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးမှ ခန့်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
မနေ့က John Travolta ပါတဲ့ Broken Arrow ဇာတ်ကားကို 4HD အစီအစဉ်က ပြနေတော့ ပြန်ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။
အဟဲ… မြန်မာဘာသာပြန်ချက်တွေကတော့ လန်ထွက်နေတာပဲ။ မှတ်မိသလောက် ပြန်ပြောပြရရင်…
► မင်းသားက ဆေးလိပ်သောက်နေတယ်။ အဲဒါကို နောက်တစ်ယောက်က Do you mind? လို့ ပြောလိုက်တယ်။ မသောက်ဘဲ နေလို့ ရမလားဆိုတဲ့အနက်နဲ့ မေးတာပါ။
ဒါကို MRTV4 က ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တွေက ဘာသာပြန်လိုက်တာက စိတ်ဆိုးလားတဲ့။ မင်းသားက ပြန်ပြောတယ်။ I don’t mind တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့… စိတ်မဆိုးပါဘူးတဲ့။
► နောက်တစ်ခုကတော့ အမေရိကန်ကားတိုင်းမှာ အဲဒီ့ဆရာသခင်တွေ ကျေးဇူးရှင်တွေ ပြန်နေကျ စကားလုံးပါ။ gas ကို ဓာတ်ငွေ့လို့ ပြန်တယ်ခင်ဗျ။
ဟုတ်ကဲ့… အမေရိကန်တွေက ဓာတ်ဆီကို gas လို့ ခေါ်မှန်း သိကို မသိရှာတဲ့သဘောပါ။
► တကယ်လို့များ Step on the gas လို့ ရေးထားရင် ဓာတ်ငွေ့ပေါ်ကို ဖိနင်းပါလို့များ ပြန်ကြမလား မသိဘူး။
မသိရင် မှတ်ထားပါ။ Step on the gas! လို့ ပြောတာ မြန်မြန်မောင်းခိုင်းတာ ခင်ဗျ။
► ►► အဆိုးဆုံးကတော့ 20 Bucks ကို ဘတ် ၂၀ လို့ ပြန်လိုက်တာပါပဲခင်ဗျား။
ဟုတ်ကဲ့… အမေရိကန်တွေက ဒေါ်လာကို buck လို့ အလွယ်သုံးပါတယ်။ အမေရိကန် ဒေါ်လာကြီးနဲ့ ပြထားတာကို ထိုင်းသုံးငွေ ဘတ်လို့ ပြန်ထည့်လိုက်တဲ့ အဲဒီ့ ဆရာသခင် ကျေးဇူးရှင်တွေရဲ့ ရွှေဦးနှောက်ကို ရွှေချထားသင့်ပါတယ်။
သြော်… ပဲခူးရေကြီးတာကတော့ MRTV4 အပါအဝင် တစ်ပြည်လုံး လွှင့်နေတဲ့ ရုပ်သံလိုင်းတွေဆီအထိ ရောက်ကုန်ပါပေါ့လားးးးး
ရွှေပြည်ကြီးရဲ့ အနာဂတ်ကတော့ လှချင်တိုင်း လှနေပါပေါ့ဗျားးးး
မနေ့ညက ကျိတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲ ဆို အဲ့လို တလွဲတွေ တင်းကြမ်းရယ်….။
အဲ့ထက် ပိုဆိုးတာ တွေ့မိတာက ကျော် ကြည့်တဲ့လိုင်းက
စိန-ဘာမန် တွေများ ၀င်ပြန်နေရော့သလား ဗျာ…
အဖေ နဲ့ သား စကားပြောခန်းလည်း နင်နဲ့ ငါပဲ
၀န်ထမ်းက စီအီးအိုကို ပြောလည်း နင် နဲ့ ငါပဲ…
ကျော်ဖြင့် … နင် နဲ့ ချည်းပဲ ကိုင်တုပ်ချင်တော့တာဗျဲ…။
အာ့ လာကျောရာ …။
ကျွန်တော်ကတော့ ပြန်တုန်းက တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့.. အတိအကျနီးပါး ပြန်ပေးတယ်.. မရတာတွေဆိုရင် အနီးစပ်ဆုံးရအောင် ရှာတယ်… ပြန်ပေးတယ်…
နာတို့ ဖောရင်းကန်ပနီတွေကို ဘာသာပြန်ပေးရရင် Tag Line, Head Line ဆိုရင် ကဗျာဆန်ဆန် စကားလုံးလှလှတွေနဲ့ option သုံးလေးမျိုးလောက်ပေးရတယ်… စာကိုယ်ပါ အပါ ဘာသာပြန်သမျှစာကို back translation ပြန်လုပ်ပေးရတယ်… အဲဒါမှ လက်ခံတာ၊ back translation ကိုဖတ်ပီး သူတို့မကျေနပ်ရင် ကွန်ပလိန်းပြန်တက်တယ်၊ MRTV4က ကိုကိုမမများကတော့ ထင်ရာစိုင်း ထင်ပါရဲ့
ရွာထဲ ဘာသာပြန် ဂျွတ်တဲ့ထဲ ရှာရာဗိုပါကိုကိုကြောင် ထိပ်ဆုံးတန်းက ပါရဲ့…။
တခါတခါ သဂျီး ပြန်ရမှာ ပျင်းလို့ … သိုးဆောင်းလိုချည်း အပိုဒ်လိုက် ကူးတင်ရင်
သူပြန်ပြတာများ ဖတ်ရတာ အင်မတန် ကောင်း…။
ဒါဆို ဦးကြောင်ကြီးက တဂျီးလက်စွဲပေါ့…
ဟုတ်တယ် .. ဂီဂီ အဓိကကတော့ ဇာတ်လမ်းမကြည့်ဘဲ ပြန်လို့… Time Line ထုတ် ရုပ်ရှင်ကြည့် ပြန်ရင် အဲလို မဖြစ်တော့ဘူး…
ဒါဆိုလဲ သိသလောက် ယူရတာပေါ့ဗျာ… ပညာရှာပမာ သူဖုန်းစားတဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ မရှက်တတ်ပါ…
အော်… ၀ိုးရယ်… ကားတွေ များတော့ မစစ်နိုင်တော့လို့ နေမှာပေါ့… ဒါတောင် Third Party ဌားဖို့လဲ ကပ်စေးနဲနေသေးတယ်..
သေသေချာချာ ရှင်းပြသွားတဲ့ ဇီဇီ… ပညာလဲရ ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ်…
အဲဒီ ရုပ်ရှင်ဘာသာပြန်တဲ့ဆီမှာ ဒစ်ရှင်နရီထဲကလို တိုက်ရိုက်ပြန်တာမျိုးကလည်း အတော်ဆိုးသဗျာ ၊
ဥပမာ လူ ၂ ယောက်က ကောင်မလေးအကြောင်း ပြောနေတယ် ဆိုပါစို့ ၊
၁ = မင်း သူမကို သိလို့လား
၂ = ငါ သူမကို မသိပါဘူး ၊ သူမအမေနဲ့တော့ ရင်းနှီးတယ် ၊
ကဲ အဲသလို အပြင်မှာ ဘယ်သူပြောလဲ ? ဘယ်သူမှ မပြောဘူး ၊
၁ = မင်း သူ့ကို သိလို့လား
၂ = ငါ သူ့ကို မသိပါဘူး ၊ သူ့အမေနဲ့တော့ ရင်းနှီးတယ် ၊ ဒီလိုပဲ ပြောတာမဟုတ်လား ၊
နောက်တစ်ခုကတော့ ဇီဇီ့ကောမန့်ထဲကလို သူတို့ဆီက အသုံးအနူန်းကိုလည်း သိထားသင့်တာ အမှန်ပါပဲ ၊
ကြုံလို့ ကျနော့်ဌာနအတွက် ဘာသာပြန်ခေါ်တော့
လာဖြေတဲ့သူတစ်ယောက်က Chelsea Boss Mourinho ဆိုတာကို
ချဲလ်ဆီးအသင်းပိုင်ရှင် မော်ရင်ဟို လို့ ပြန်သဗျာ ၊
မော်ရင်ဟိုက ချဲလ်ဆီးနည်းပြလား ပိုင်ရှင်လားတောင် မသိမှ ကျနော် ဘယ်လို ခန့်ရပါ့မလဲ ၊
Boss ဆိုတာ သူတို့က နည်းပြကိုလည်း ဆိုလိုတတ်သေးတာကိုး ၊
ဟားဟား.. ကိုမျိုးသန့်.. ခုမှပဲ ပို့စ်လေးက စိုပြေသွားတော့တယ်ဗျ… အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
ကျနော်လဲ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ တတ်သလောက်လေး မျှဝေချင်ပါတယ်။ မောင်ဂီလားမသိ တစ်ခါပြောဖူးတာ ဘာသာစကားတစ်ခု တတ်ချင်ရင် နည်းက ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ သီချင်းနားထောင်၊ ရည်းစားထား ဒါက အမြန်ဆုံးနည်းပါ။ ကျနော် အပေါ်(၂)ခုကို အမြဲလုပ်ပါတယ်
ငယ်ငယ်တုံးက ဆရာတွေသင်ဖူးတာ အင်္ဂလိပ်လိုတတ်ချင်ရင် အင်္ဂလိပ်လိုတွေးရတယ်တဲ့ .. ဆိုလိုတာ က သူတို့ ဘယ်လိုနေတတ် တွေးတတ် ပြောတတ်တယ်ဆိုတာလေ့လာဖို့ပြောတာပါ။
ဥပမာပြောရရင် ကျနော်တို့ နာဂစ်ပီးစ အိုင်အန်ဂျီအို တာဝန်တစ်ခုနဲ့ ဖျာပုံဘက်ရောက်တော့ ညစာစားရင်း၊ ထမင်းပွဲမှာ အချိုပွဲမှာတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေက နာနတ်သီးနဲ့ ပန်းသီးမှာပါတယ်။ လာချတော့ သရက်သီးနဲ့ လိမ်မော်သီး။ ကျနော်က ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတဲ့ ဆိုင်ကို အစထဲက စိတ်ချဉ်ပေါက်နေတော့ ပွစိပွစိလုပ်ပါတယ်။ ဒါကို သူတို့က ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့လှမ်းမေးပါတယ်။
I ordered pineapple & apple. They give mango & orange. Very interesting.
ကျနော် နာနတ်သီးနဲ့ ပန်းသီးမှာခဲ့တာ။ သူတို့က သရက်သီးနဲ့ လိမ်မော်သီးပေးတယ်။ သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲ။
Very interesting ဆိုတာ ကျတော် ရွဲ့ပြောလိုက်တာပါ။ မြန်မာလိုစဉ်းစားရင် I’m sick of their service. သူတို့ဝန်ဆောင်မှုကို စိတ်ကုန်တယ်တို့ ပြောရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့သာမန်အဆင်မပြေတာလေးလောက်ကို ဒီလိုပဲ ခပ်ရွဲ့ရွဲ့ပြောလေ့ပြောထ ရှိပါတယ်။
ဒါတွေက ကျိလိုက်ရင် အရမ်းကို အခြေခံကြလွန်းပီး လွယ်လွန်းတယ်ထင်ရပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ တကယ်အသုံးဝင်ပါတယ်။
အခုရုံးမှာ ဘစ်ဇ်နက်ကိတ်စ အီးမေးပို့ရရင် ကျနော် သူတို့မြန်မာလိုပြောတာကို အဓိပါယ်ပေါက် နားလည်အောင် သေချာလုပ်ပါတယ်။ ပြီးရင် အင်္ဂလိပ်လိုချရေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျတော်ရေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို မြန်မာလို အတိအကျ ၏၊သည် မလွှဲဘာသာပြန်ပေးပါတယ်။ ဒါ ကျနော်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းပါ။ ဗမာလိုနားလည်ထားတာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသုံးတဲ့လူတွေ နားလည်အောင် ရေးရတာပါ။ ဗမာလိုစဉ်းစားထားတာကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင် သူတို့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသုံးတဲ့သူတွေ နားမလည်တော့ပါဘူး။
အချိန်ရရင်တော့နောက်ပိုင်း TVC Script ဘာသာပြန်နဲ့ back translation လေးတွေ ပြောပြပါဦးမယ်။
ဒင်း ကတော့ နောက်ဆုံး တစ်ခုပဲ လုပ်တဲ့ သဘောပဲ။
၀ိုးရေ… ပို့စ်တခု အနေဲ့ တင်ပါလားကွယ်… Request ပါ.. ရှာရလဲ လွယ်သွားရောလေ…
အချိန်ရရင်ပေါ့ ရေမြေ့သနင်းရယ် ကိုယ့်အတွေ့အကြုံလေးတွေတော့ မျှဝေပေးချင်ပါသေးတယ်
စောင့်မျှော်နေပါတယ်… ၀ိုးရေ… ပညာရတာပေါ့…
အမှန်တိုင်းပြောရရင် မူကြိုကနေ ဆယ်တန်း အထိ အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်နှုန်း နဲ့ ဆယ်တန်းကနေ တက္ကသိုလ်တက်တော့ အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်နှုန်းက အရမ်းကွာသွားတယ်။ ၁ နဲ့ ၁၀ လောက်ကို အချိုး ကွာသွားတာ။
ဘာလို့လဲဆို စတိတ်ကျောင်းတက်တုန်းက အင်္ဂလိပ်စာ ကို ကျောင်းစာ အနေနဲ့ပဲ အများဆုံး သုံးရတာကိုး သီချင်းနားထောင် ရုပ်ရှင်ကြည့်က နည်းတယ်။ ဒါတောင် Air Supply တို့ westlife တို့ britney တို့ နားထောင်နေပြီ ၇တန်း ၈တန်းလောက် ရောက်တော့။
ဆယ်တန်းလဲ ပြီးရော အမ်ပီသရီးခေတ် ဒီဗီဒီ ၈ကားတွဲခေတ်ရောက်ပြီလေ ရုပ်ရှင်တွေ စီးရီးစ်တွေ သီချင်းတွေ စုံပလုံစိနေအောင် ကြည့်တော့ နားထောင်တော့တာ subtitle လေးနဲ့ ဆိုတော့ အဆင်ကို ပြေလို့။
အဲဒီမှာကျတော့ စိတ်ကလဲ ဝင်စား သွားပြီ ဆိုတော့ မသိတဲ့ စကားလုံးတွေ စကားဆက်တွေ ကို လိုက်ရှာ သူများကို မေး နဲ့။
နောက်ပြီး ခေတ်ပေါ် စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေ အများကြီး သိလာတယ်။ ပြီး ဗဟုသုတလဲ ရသား။
ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်း သူများတွေ အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းချင်တယ် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ လာမေးရင် ရုပ်ရှင်တွေ တီဗီ စီးရီးစ် တွေ များများ ကြည့်လို့သာ ညွှန်းဖြစ်တော့တယ်။
ကျနော့်တုန်းကလဲ CSI Las Vegas ကို Season 1 to 8 ကြည့်ပလိုက်တာ ဟီးဟီး
နောက်တော့လဲ ထွက်သမျှ အပိုင်းတွေ ဆက်ကြည့်နဲ့ အခုဆို အဲဒီ စီးရီးစ် အစအဆုံး ကုန်ပြီ။
အမှန်တိုင်း ပြောရရင် အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်လာတာ… သူများတွေကြောင့်… ၀ါသနာပါပေမယ့် သိပ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး… အခွေတုန်းကလဲ ပိုက်ဆံရလို့… တခြားလုပ်ခဲ့တာတွေက တော်တော်များများ အကုန်နီးပါးက ပိုက်ဆံကြောင့်ပဲ.. အဓိကက တတ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး ငတ်လို့ လုပ်ခဲ့ရတာချည်းပဲ… ဒါတောင် ဝေးရင် ချိတ်ကမာသလိုပဲ… တော်တော့ကို ပြန်နွေးရတယ်…
ကော်မန့်အရှည်ကြီး ဘာလို့ ပေးမရတာလဲ.. ပေးလိုက်ရင် ပလုံပလုံ လုပ်တင်း ချည်းပဲ…
..Olympus has Fallen အခွေထဲမှာ ဘာသာပြန်တာက The Secretary of State ကို အတွင်းရေးမှုးတဲ့ဂျ ….မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာထဲမှာဖတ်မိတာက Maritime surveillance ship ကို မာရစ်တိုင်း သင်္ဘောတဲ့ .ဂျ …Defense Secretary Chuck Hagel ကို .. ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှုးတဲ့ဂျ…အဟိဟိ ..ကျော် ..စာမတတ်တာပဲဖြစ်မှာပါလေ …
ဟုတ်လား ဆောရိုး ကျွန်တော် ကြည့်ဖူးတယ်.. ဒါပေမဲ့ သတိမထားမိဘူး… ကြည့်စမ်း… ဟားဟား… ကျေးဇူးပါ…
ကျနော်က တော့ ဘာ သာ မပြန်တတ်ပါဘူး။
မပြန်တတ်ဆို သူများ ဘာသာ စကား ကို မှ ကျနော်မတတ်တာ။
အဲတော့ ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဘဲ အမြဲ ဖတ် ရပါတယ်။
ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း ဘာသာပြန်တယ်လို့ မထင်ရလောက်ကောင်းသူ။
ဆရာမောင်ထွန်းသူ ဆရာမြသန်းတင်ပ ဆရာ မောင်ပေါ်ထွန်း တို့ရဲ့ဘာသာပြန်စာပေတွေနဲ့ ကျနော်ကြီးပြင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်
တစ်ချို့ကတော့ အတိအကျ တစ်ချို့ကတော့ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်း တစ်ချို့ကတော့ ကိုယ်ပိုင်ရေး ဟန်
ဘာနဲ့ ဘာသာပြန်ပြန် သူ့ ဆိုလိုရင်း ကို ဖတ်နေသူရဲ့ ရင်ထဲ ကို လျှောကနဲ ၀င်သွားအောင် ပြန်နိုင်ဘို့ဘဲလိုပါတယ်.
ကျနော်အခုချိန်ထိ သတိရ နေတဲ့ ဘာသာပြန်စာ ကြောင်းလေးတစ်ကြောင်း ရှိ တယ်
” ခွေးလိုဝက်လိုမိုးရွာနေသည်မှာ ၀မ်းဘဲတစ်ကောင်ပင်ရေနစ်သေစေလောက်သည်” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးပါဘဲ။
နိုင်ငံခြားလျို့ ၀ှက်သဲဖို ၀တ္တု ကို ဘာသာပြန်ထားတာပါ။
မိုက်တယ်နော် 1978လောက်ကဖတ်ထားတဲ့ စာ အခု ထိ ကို မှတ်မိနေအောင်ဘာသာပြန်ထားလေ။
လေးပေါက်ရေ… ကျွန်တော်နဲ့ လေးပေါက် စိတ်ချင်းဆက်နေတယ် ထင်တယ်… မယုံရင် Comment By Posts ကို ကြည့်လိုက်… ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်လေး မန့်ထားကြတယ်…
စိတ်ပါရင် ပြန်တယ် (ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်)
(တစ်နှစ်မှ တစ်ခါလောက်ပဲ စိတ်ပါတာ)
ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ် subtitle ကို HI(Hearing Impaired) မပါတာနဲ့ကြည့်တယ် (listening ရော speaking ရော တစ်ခါထဲ ပြီး)
သတင်းဖတ်တယ် google မှာ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာမွှေတယ် သူတို့ရေးပုံလိုက်ကြည့်တယ် ဒါပဲ
ဘာသာစကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောပြတာပါ ကိုရင်
ကျွန်တော်တော့ အဲလောက် မဂျွတ်သေးဘူး.. ဦးမာဃရဲ့… ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် အင်္ဂလိပ်စာတန်းတော့ ကြည့်တယ်ဗျ… ဘာလို့ဆိုတော့ ကိုယ် မသိတဲ့ စကားလုံးတွေ အများကြီးပဲမို့.. ဒါပေမဲ့ ကြည့်ဖန်များလာရင် ဒီအမျိုးအစားချည်းပဲပေါ့… ဥပမာ စစ်ကားဆို စစ်ကားချည်းပဲ ကြည့်တာကြာလာရင်တော့ Terms တွေ ရင်းလာပြီး စာတန်းလွတ်ရချင်ရသွားတယ်.. ဒါမျိုးက တော်တော် ကြာမှပါ… ဟီး.. မကြည့်တာ ကြာရင် ပြန်မေ့သွားပြန်ရော…
ဘာသာပြန် ဆိုရင် အကြိုက်ဆုံး က ….
ဆုံးခြင်းမဲ့တဲ့ ဘာသာပြန်ရယ် မငိုချင်ဘူးကွယ်။
“ဗဒင် – ဘာသာပြန်”
Friendship needs no translation.
ဘာသာ ဆိုတာ ပြန်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ သိပ်ကောင်း တာမဟုတ်။
မြစပဲရိုး… အရီးခင် အကုန် အတူတူပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်… လာမမန့်တာတောင် ကြာပေါ့…
ဒီပို့စ်လေးကို အရမ်းကျေနပ်သွားပြီ… ရေးတိုင်း ကော်မန့်ရရမယ် မဆိုပါဘူး… ဒါပေမဲ့ မျှော်တာတော့ မျှော်ပါတယ်.. အခုတော့ လူတော်တော့ ကို စုံသွားပြီဗျာ… ရေးခဲ့သမျှ သက်တမ်းမှာ ဒါ ကော်မန့် အများဆုံးရတာပဲ… :D မိန်းမကတော့ ပြောပါတယ်… သူကဖြင့် တ၀က်လောက် ရေးနေပြီးတဲ့… ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော့… သူများလာရေးမှ ပြန်ရေးရတာကို… ဟုတ်ဘူးလား… အရီးခင်…
ဆရာ တက်တိုးက ပြောဖူးတယ်
အရမ်း ဘာသာ မပြန်နဲ့ တဲ့။
ဆက်ဆက်.. မတင်ရဲရင် မေးလ်နဲ့ ပို့ပေးပါလား… ဖတ်ချင်လို့… နော်… နော်…